နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Dr.Surakiart Sathirathai အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Dr.Surakiart Sathirathai အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Dr.Surakiart Sathirathai အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဇူလိုငျ 18, 2018 In: AppointmentNo Comments
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၁၇
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Dr.Surakiart Sathirathai ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင် (၈) ဦးတို့အား ယနေ့နံနက် (၁၀)နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံစဉ် အကြံပေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် များကို အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အကြံပေးအဖွဲ့၏ ပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ခရီးစဉ်များအပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအား ဖြေရှင်းသွားရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်များအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရေးတို့ နှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယခုတွေ့ဆုံမှုသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ အကြံပေးအဖွဲ့အနေဖြင့် စတင်ထူထောင် ပြီးချိန်မှစ၍ တတိယအကြိမ် လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာ အကွံပွုခကျြမြားအပျေါ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျရေး ကျောမတီ၏ အကွံပေးအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌ H.E.Dr.Surakiart Sathirathai အား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော ဇူလိုငျ ၁၇
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာ အကွံပွုခကျြမြားအပျေါ အကောငျ အထညျဖျောဆောငျရှကျရေးကျောမတီ၏ အကွံပေးအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌ H.E.Dr.Surakiart Sathirathai ဦးဆောငျသညျ့ အဖှဲ့ဝငျ (၈) ဦးတို့အား ယနနေံ့နကျ (၁ဝ)နာရီတှငျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ယငျးသို့တှဆေုံ့စဉျ အကွံပေးအဖှဲ့၏ ဆောငျရှကျခကျြမြားနှငျ့ လုပျငနျးအစီအစဉျမြားကို အကွံပေးအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌက ရှငျးလငျး ပွောကွားခဲ့ပွီး အကွံပေးအဖှဲ့၏ ပထမနှငျ့ ဒုတိယအကွိမျ ခရီးစဉျမြားအပွီး ထုတျပွနျခဲ့သော အကွံပွုခကျြမြားအပျေါ အကောငျ အထညျဖျော ဆောငျရှကျမှု၊ ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာ စိနျချေါမှုမြားအား ဖွရှေငျးသှားရေးနှငျ့ လူမှုစီးပှားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး စီမံခကျြမြားအား ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားရေးတို့နှငျ့ ပတျသကျ၍ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ယခုတှဆေုံ့မှုသညျ ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာ အကွံပွုခကျြမြားအပျေါ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျရေးကျောမတီ၏ အကွံပေးအဖှဲ့အနဖွေငျ့ စတငျထူထောငျ ပွီးခြိနျမှစ၍ တတိယအကွိမျ လာရောကျတှဆေုံ့ခွငျးဖွဈသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ့ဆှေ၊ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသောငျးထှနျး၊ လူမှုဝနျထမျး၊ ကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေး၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျ ရှကျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျနှငျ့ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ – (၂၁)ရာစုပင်လုံတတိယအစည်းအဝေး ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ် အစိတ်အပိုင်း(၂ )
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံမဟာဗျူဟာနှင့် နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီး ဦးညွန့်မောင်ရှိန် နှင့်အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ တီလက် မာရာပါနာအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဧပွီ 18, 2019
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဧပွီ 09, 2019
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato’ Saifuddin Abdullah အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒီလှိုင်းစာစောင်၊ အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၁၄)၊ ၈-၄-၂၀၁၉
ဒီလှိုင်းစာစောင်၊ အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၁၃)၊ ၁-၄-၂၀၁၉
ဧပွီ 02, 2019
ဒီလှိုင်းစာစောင်၊ အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၁၂)၊ ၂၅-၃-၂၀၁၉
မတျ 25, 2019
ဒီလှိုင်းစာစောင်၊ အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၁၁)၊ ၁၈-၃-၂၀၁၉
မတျ 19, 2019
ဒီလှိုင်းစာစောင်၊ အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၁၀)၊ ၁၁-၃-၂၀၁၉
မတျ 12, 2019